Aakar December 18, 2007
"तर" कुनै काम पार लगाउने सन्दर्भ या दुध को तर को लागि भनेको होइन । यहाँ "तर " अर्थात but, लेकिन को कुरा गरिदैँछ । " तर" एउटा ठुलै शब्द रहेछ । हाम्रो नेपाल को सन्दर्भ मा प्रचलित केहि " तर" हरु: नेपाल मा के छ , अनि के छैन ?
Ø मोवाइल सेट छ , तर सिम छैन ।
Ø सिम छ , तर नेटवर्क छैन ।
Ø जलस्रोत छ , तर खानेपानी छैन ।
Ø जलस्रोत छ , तर बिजुली छैन ।
Ø बिजुली छ , तर लाइन छैन ।
Ø लोढसेडिङ छ , तर कहिले-कति-हुन्छ ठेगान छैन ।
Ø गाडि छ , तर पेट्रोल छैन ।
Ø सिलिन्डर छ , तर ग्यास छैन ।
Ø ग्यास छ , तर पैसा छैन ।
Ø सरकार छ , तर राज्य छैन ।
Ø प्रशासन छ , तर सुशासन छैन ।
Ø रेडियो छ , तर फ्रिक्वेन्सी छैन ।
Ø फोहोर छ , तर डम्पिङसाइट छैन ।
Ø गाडि छ , तर बाटो छैन ।
Ø राज्य जिर्ण बन्दैछ , तर कुनै लाउके नेतालाई मतलब छैन ।
Ø भारत ले सिमाना मिच्दैछ , तर कुनै प्रतिक्रिया छैन ।
Ø महँगी छ , तर आम्दानी छैन ।
Ø बेरोजगारी छ , तर काम छैन ।
Ø काम छ , तर जनशक्ति छैन ।
Ø जनशक्ति छ , तर प्रबिधि छैन ।
Ø कृषक छन् , तर उत्पादन छैन ।
Ø उत्पादन छ , तर बजार छैन ।
Ø "उखु" छ , तर मुल्य छैन ।
Ø स्कुल छ , तर गुणस्तरीय शिक्षा छैन ।
Ø शिक्षित छन् , तर नैतिकता छैन ।
Ø भ्रष्टचारी छन् , तर कारवाही छैन ।
Ø प्लेन छ , तर उडान छैन ।
Ø संविधानसभा हुने भएको छ , तर मिती को ठेगान छैन ।
Ø धुम्रपान ले हानि गर्छ भन्ने थाहा छ , तर तान्न छोड्या छैन ।
Ø गौतम बुध्द को पाइला छ , तर शान्ति छैन ।
बब्बाल डटकम तथा डामाडोल डटकम मा प्रकाशित
NKM December 18, 2007 at 7:39 PM
उपाय छ, तर इच्छा छैन |
Anonymous December 19, 2007 at 2:27 AM
वाहः गजबको लाग्यो मलाई त यो लेख | दिब्य उपदेश/ संदेश भन्दा कम छैन | तर काम छ जनशक्ति छैन चाही अली चित्त बुझेन यार. बरु जनशक्ति छ, काम छैन भन्या भये हुन्थ्यो की ??
राम्रो छ यार जे होस
Anonymous December 20, 2007 at 12:35 PM
yehi kura nai ta chhan nepallai chinaune
deepa December 22, 2007 at 9:53 AM
मेने तो सोचा था कि आप कम्पुटर के विद्यार्थी हो पर आप तो काफी अच्छे कवि भी निकले।
deepa November 12, 2010 at 4:58 AM
www.rab.com.np November 12, 2010 at 4:58 AM